Basketball toy ny Mpilalao Short - Advantages & Tips
Sports Ahoana ny fomba hilalao an-tsarety?
Ny Torolalan'i Nate Robinson momba ny fahombiazana
Isika rehetra dia teo. Ianao no bandy indrindra ao amin'ny fitsarana - na farafaharatsiny farafaharatsiny mba hisintonana ny fikomiana avy amin'ireo sehon-javatra izay mametaka ny boards rehetra. Fa ny hoops dia tsy filalaovana fotsiny. Spud Webb, ohatra, dia nilalao tao amin'ny NBA nandritra ny 13 taona ary nandresy tamin'ny fifaninanana slam dunk tamin'ny 1986. Na izany aza, na dia 5 metatra fotsiny aza izy dia 6 metatra ny halavany - fohy amin'ny fenitry ny NBA.
Roa taona taty aoriana, Nate Robinson - izay mitsangana 5 metatra 9 - nanao toy izany, nandresy tamin'ny fifaninanana dunk 2006 tamin'ny fifaninanana. Raha ny marina, tao anatin'ny hadalany tsy hay hadinoina, dia nitsambikina tao amin'ny Webb i Robinson ary nahazo ny isa 50 lavitr'ezaka ho an'ny ezaka, Wikipedia nanamarika. Ireo mpilalao roa ireo dia nanao izany satria mafy sy haingana ary nanana fo be. Na izany aza, na dia tsy mpilalao mahay indrindra aza ianao ao an-tokotany, dia mety hisy fiantraikany goavana raha manana ny tricks sy ny teknikanao ianao, araka ny fanazavan'i Robinson.
Betsaka kokoa noho ianao ireo
Ny ballerina kely kokoa dia mora kokoa noho ny lalan-drivotra sy ny làlan-tongotra fa tsy mpilalao lalao. "Ry zalahy kely kokoa, mila miasa mafy kokoa isika noho ireo zatovo lehibe kokoa. Tokony handoro hery bebe kokoa izahay, "hoy i Robinson, izay nilalao tao amin'ny NBA nanomboka tamin'ny taona 2005 ka hatramin'ny 2015. Saingy, tsy ampy ny mivoaka eto ary manana haingam-pandeha bebe kokoa - mila manana ny fihazakazahana manerana ny lalao manontolo ianao. "Tokony hohanina tsara ianao," hoy i Robinson manampy, "ary manahoana hatrany ny tovolahy manaraka. Manana ny havokavoka toa an'ireo mpilomano. "
Mieritreritra ianao fa ny fanamafisana ny haingam-pandeha dia tsy hahitana afa-tsy ny famolavolana ny tongotrao, ary azo antoka fa anisany izany, fa ny fikirin'i Robinson dia mazava: "Maro ny abs. Manampy anao amin'ny fitsangatsangananao izany. Afaka manampy anao be dia be amin'ny fandanjalanjana, manodina havia sy havanana izany. "Ataovy antoka fa mifantoka amin'ny hery lehibe ianao satria afaka manampy anao hifindra tsikelikely izany.
Lehilahy kely kokoa no maniry hanana fo lehibe kokoa
Ny fahasahiranana anatiny ihany koa dia manan-danja, hoy Robinson: "Tsy maintsy ho feisty ianao. Tokony ho tapa-kevitra ny handresy ianao na inona na inona, na manao ahoana na manao ahoana. "Ny haingam-piainana sy ny fananana dia manome fitaovana ara-batana, fa inona kosa no hataonao? Ny fanalahidin'i Robinson dia "manana tapa-kevitra ny hahazo ny baolina tsy hitanao eny amin'ny tany".
Ianao dia Elbow Elevation
Inona no valisoa azonao amin'ny asa mafy rehetra? Mitana ny oronao amin'ny toerana misy ny mpanohitra anao? Mandeha miantsena amin'ny gorodona, mikopakopaka amin'ny alatsalatsa, ary ny maha-masindahy mpanjaka azy? "Nokapohin 'ny elany ny tarehinao ary nandondona be," hoy i Robinson. Izany no mahatonga ny fonao miditra ao, mamely indroa. Mampiseho fo ianao raha miditra ao amin'ny scrum miaraka amin'ny mpilalao lehibe kokoa. "Manàna fo lehibe", hoy i Robinson, "Ny ankizy madinika dia tsy mitsahatra na inona na inona."
Apetraho eo amin'ny fiainanao ny fifantohana
Ampiasao ny tombontsoa ara-batana azonao, ho ny lehilahy mavitrika indrindra eo amin'ny fitsarana, fa ny tena manan-danja indrindra, amin'ny basketball na zavatra hafa ataonao, aza lavinao mihitsy. Hoy i Robinson: "Eritrereto tsara foana ny tenanao, fa raha misy mpilalao na mpanazatra tsy mino anao, dia minoa ny tenanao." Tsy hihaino olona iray aho, raha te hilaza amiko hoe azoko atao hoe ' T. Hahazo antoka aho fa hanao izany ho an'ny tenako. Mifantoka amiko fotsiny aho. "
Football 101: Understanding and Distance
Fanandramana ara-panatanjahan-tena: fitsipika sasantsasany sy lalànan'ny baseball
Fantaro ny endriky ny fizarana NCAA Division 1 College World Series
Ahoana no fomba hilalao an'i Sam Linebacker
Ahoana no fomba hilalao an'i Linebacker
6 Fanatanjahantena fanatanjahan-tena mialoha ny lalao ho an'ny ekipan'ny tanora basketball
Torohevitra ho an'ny tanora mpilalao baolina kitra
Ahoana ny fomba fitazonana bokotra baseball
Ny fomba hahatongavana ho mpanararaotra
Ahoana ny famoahana baolina
Andraikitry ny mpilalao baolina kitra
Manaova ranomandry avy amin'ny rano mangatsiaka
Fahafantarana an'i Yolanda Adams
Kolontsaina Politika sy zo maha-olom-pirenena
Artists and Copyright: Sary avy amin'ny Reference References
FAQ Momba an'i Singapore
Revolisiona Amerikana: Fanentanana vao haingana
Torohevitra momba ny vola amin'ny asa ivelany
5 lohahevitra amin'ny asan'i John Ruskin
Ny famaritana ny "Llano Estacado" any Etazonia sy manerana an'izao tontolo izao
Alefaso ny resadresaka momba ny fifanakalozan-dresaka ao amin'ny Club amin'ny "Where'd you go, Bernadette?"
Estuary English (Teny Variety)
Tsy notondroina ny USCIS ny fifidianana
Tsy misy fitsangantsanganana ny afovoan-trano
Inona no atao hoe stimpmeter ary ahoana ny fampiasana azy?
Toetrandro: Ny mpikambana very ao amin'ny Cloud Family
10 Best Reggaeton Hira Classic
Top 3 Heavy Spinning Reel
Ahoana no handraisanao ny lalao golf tsara indrindra?
Inona ny adiresin'ny Club Golf an'ny firenen'i Augusta?
Ahoana ny fomba hanehoana 'CH' amin'ny teny frantsay?
Fifanarahana akaiky amin'ny Gramma
Fantaro ny fomba hanombohana